देश दौडाहामा एमाले नेता तयारी चुनावको ! – Taja Khawar
देश दौडाहामा एमाले नेता तयारी चुनावको !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: १२:२५:०९
झापा, रूपन्देही, काठमाडौंजस्ता जिल्लामा आयोजित भेला, बैठक, प्रशिक्षणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न थालेका छन् । युवा संघ र अन्य जनवर्गीय संगठनका पनि भेला, बैठक शुरु भएका छन् ।
केन्द्रीय नेताहरू देश्यव्यापी रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन् ।
बिहीबार सुवास नेम्वाङ उदयपुरको गाईघाट, भीम रावल कैलाली हुँदै अछाम, घनश्याम भुसाल रूपन्देही, योगेश भट्टराई पर्वत, सुरेन्द्र पाण्डे चितवन, पोखरा हुँदै बाग्लुङ पुगेका छन् ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल काभ्रे पुगे। युवराज ज्ञवाली, विष्णु रिजाललगायतका नेता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर काठमाडौं फर्किसकेका छन्।
असोज २ गते एमाले निकट निजामती कर्मचारीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
धेरैजसो कार्यक्रममा एमाले नेताहरूले चुनाव लक्षित भाषण गर्न थालेका छन्। उनीहरूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना एमालेले मात्रै गरेको र त्यो लक्ष्य पूरा गर्न एमाले नै सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
आगामी निर्वाचनमा एमालेकै जित हुने दाबी उनीहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन्।
बाहिर जानेजति गइसके। उनीहरूलाई हेरेर भन्दा पनि जनतालाई हेरेर संगठन गर्नुपर्छ’, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने। विधान अधिवेशनको समेत तयारी गर्नुपर्ने भएकाले देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम तय गरेको उनले बताए।
एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म पहिलो विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशनमा देशभरबाट ३ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्।
Last Updated on: September 17th, 2021 at 12:25 pm